‘Mpisatroka Fotsy’ ao Siria Nanavotra Aina Maro, Voatondro Hahazo Ny “Loka Nobel Ho An’ny Fandriampahalemana” · Global Voices teny Malagasy
‘Mpisatroka Fotsy’ ao Siria Nanavotra Aina Maro, Voatondro Hahazo Ny “Loka Nobel Ho An'ny Fandriampahalemana”
Voadika ny 16 Aogositra 2016 13:34 GMT
Vakio amin'ny teny русский, عربي, Español, Português, srpski, Français, Deutsch, English
Mpirotsaka an-tsitrapo Misatrka Fotsy. Loharano: White Helmets.
Voatondro hahazo ny “Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana” ny Sampam-Piarovana Sivily Siriana, fantatra ihany koa amin'ny hoe ireo Mpisatroka Fotsy. Voalaza ho nanavotra aina maherin'ny 56.000 ary ahitàna mpirotsaka an-tsitrapo eo amin'ny 3.000 isa eo, mety hahazo ilay fankasitrahana tsara indrindra eto an-tany ‘lokan'ny fandriampahalemana’ ireo Mpisatroka Fotsy.
Taminà tafatafa vao haingana niaraka tamin'ny Public Radio International, nomenì'i Ishmael Alabdullah, Mpisatroka Fotsy 29 taona, avy any Alep ny azo lazaina ho filôzôfian'ny Mpisatroka Fotsy:
Rehefa mahita olombelona mijaly ianao, mila manao zavatra hanampiana azy ireo ianao. Raisiko ho mahery fo daholo ireo olona mipetraka ao Alep, izy rehetra.
Ao amin'ny vohikalan'izy ireo, manazava ny “zavatra ilaina hamonjena aina” ny Mpisatroka Fotsy :
Tao anatin'ny fifandirana nahafaty olona betsaka indrindra tamin'izao vanim-potoanantsika izao, nisy vondrona mahery fo tsy nampoizina nisongadina. Nivondrona ireo mpanjaitra, mpanao mofo, mpampianatra teo aloha ary ireo olon-tsotra Siriana, mba hamonjy ireo olona avy amin'ny fahapotehan'ny daroka baomba sy ny herisetran'ny ady any Siria. Namorona ny Fiarovana Sivilin'i Siria, lasa fanantenàna ho an'olona an-tapitrisany ankehitriny ny fanamiana Mpisatroka Fotsy mampiavaka azy ireo.
Rehefa milatsaka ireo baomba, mihazakazaka mamonjy haingana ireo Mpisatroka Fotsy. Eny amin'ny toerana izay tsy miasa intsony ireo sampandraharaham-panjakana, mahafoy ny ainy mihitsy ireo mpirotsaka an-tsitrapo ireo mba hanampiana ireo rehetra mila fanampiana, tsy mijery ny finoany sy ny politikany. Nahavonjy aina mihoatra ny 60.000 ireo mpamonjy voina mirotsaka an-tsitrapo ireo.
Nalaina tao amin'ny Korany ny teny fanevan'ny Mpisatroka Fotsy: ‘famonjena ny olona manontolo ny famonjena aina iray‘. Ao anatinà fifandirana izay maro loatra no nisafidy ny herisetra, mifoha isanandro ireo Mpisatroka Fotsy mba hamonjy ireo aina ezahan'ireo hafa alaina mafy.
Nanainga fanahy ireo olona manerana ny tany tontolo ny fahasahian'izy ireo — manomboka amin'ireo ankizy any Siria milalao ho mpamonjy voina, ka hatramin'ireo mpianatra any Norvezy izay nanome azy ireo ny lokan'ny fandriampahaleman'ny tanànany, ary tonga amin'izao fanondroana azy ireo izao hahazo ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana.
Tohanan'ny fikambanana maherin'ny 120 isa ny hetsika ‘Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana ho an'ireo Mpisatroka Fotsy’. Ahitàna ireto ireo fikambanana Siriana:
ny Hetsika Am-pilaminana Syriana,
Vehivavy Ankehitriny ho an'ny Fampandrosoana,
Ivontoerana Siriana ho an'ny Media sy Fahalalahana Manheho hevitra,
ny Biraon'ny Mpitsabon'i Ghouta Atsinanana,
Tambajotra Siriana ho an'ny Zon'olombelona,
Filankevitra eo an-Toeran'ny Mpamolavola lalàna, Ivontoerana Media Homs,
Sendikàn'ireo Mpisolovava Malalaka
ary Baytna Syria.
Ahitàna ireto ireo fikambanana Iraisam-pirenena:
ny Fondation Asfari,
Kaonfederasiôna Sendikaly Iraisam-pirenena,
Mpamonjy Silamo avy any Royaumes-Uni,
Pax Christi Vlaanderen,
Fiarahamonin'ny Mpitsabo Siriana-Amerikana,
Mpitsabon'izao tontolo izao avy any Royaume-Uni,
Ivontoeran'i Montreal ho an'ny Fanadihadiana ny Vonomoka sy Zon'olombelona,
Fikambanan'ny Mpitsabo sy ireo Fikambanana Mpamonjy voina,
Mpamonjy Voina sy Fampivoarana an'i Siria
ary Tetezan'ny Fandriampahalemana.
Tao anatin'ireo maro hafa ireo Mpisatroka Fotsy no notendren'i Jo Cox izay Solombavambahoaka avy amin'ny Antokon'ny Mpiasa ao Royaumes-Unis izay maty novonoina tamin'ny fomba feno habibiana, nataon'ny lehilahy 52 taona ny 16 Jiona 2016. Taorian'ny fahafatesan'i Cox, nanao fanangonam-bola ho fahatsiarovana i Brendan vadiny, natao hanangonana vola hanohizana ireo zavatra notohanan'ilay Solombavambahoaka nodimandry. Ireto ireo zavatra telo nofidiany : ny ‘Royal Voluntary Service‘ (Asa Firotsahana An-tsitrapo Royal), fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana manampy ireo be antitra, ‘HOPE Not Hate‘ (FANANTENANA Fa Tsy Fankahalàna), ny hetsika ‘miady hisian'ny Angletera maoderina, miara-mirona ary ny farany, ny Mpisatroka Fotsy.
Tao anatin'ny 5 andro monja, nahavita nanangona teo amin'ny £1,35 tapitrisa miaraka amin'ireo mpandray anjara niisa 41.000 (1,7 tapitrisa dolara Amerikàna) ilay hetsika, ary hatramin'izay, nihoatra ny tanjona £1,5 tapitrisa (1,9 tapitrisa dolara Amerikàna). Notlorana Satroka Fotsy ho fanomezana vononahitra azy avy amin'i Raed Saleh lehiben'ireo Mpisatroka Fotsy mihitsy aza ny fianakavian'i Cox, fankasitrahana tena manan-danja lehibe tokoa satria “ny tokony ho izy natokana ho an'ireo mpirotsaka an-tsitrapo izay namoy ny ainy tamin'ny famonjena ireo sivily any Siria”. Namoaka izao lahatsary manaraka izao ihany koa i Saleh, tamin'ny anaran'ireo Mpisatroka Fotsy.
Ny Martsa 2016, nampangain'ny Amnesty Internationla ny governemanta Siriana sy Rosiana ho nikendry ireo hopitaly hatao teti-panorona amin'ny ady, tamin'ny filazàna fa “toa hita ho nikendry mazava sy isaky izay mandeha ireo hopitaly sy toeram-pitsaboana izy ireo, tato anatin'ny telo volana lasa, mba hanamboarana làlana ho an'ireo hery an-tanety, hirosoany ho any Alep avaratra”. Ny Jiona 2016, namoaka tantara manindrona, izay antsoiny hoe ” ireo mpitsabon'ny aloka”, i Ben Taub avy amin'ny The New Yorker. Nanoratra izao izy:
Tao anatin'ireo dimy taona lasa, namono, nidaroka baomba, ary nampijaly hatramin'ny fahafatesana mpiasan'ny fitsaboana efa ho fitonjato ny governemanta Siriana, araka ireo Fizisianina ho an'ny Zon'olombelona, fikambanana izay mandrakitra ireo fanafihana atao amin'ireo mpitsabo any amin'ireo faritra misy ady. (Nahafaty fito ambiroapolo ireo tsy avy ao amin'ny fanjakàna, tafiditra amin'izany ny ISIS.) Nambaran'ireo lohateny vaventy vao haingana ny fahafatesan'ny mpitsabo ankizy farany tao Alep, ny mpitsabo fo farany tany Hama. Nanao tsoakevitra ny kaomisiônan'ny Firenena Mikambana fa “manao fanahy iniana tsotra izao mikendry ny mpitsabo mba hahazoan'ny miaramila tombony ireo hery avy amin'ny governemanta,” ary amin'ny fandavana ny fikarakaràna ireo mpiady sy sivily maratra “ho toy ny resaka politika.”
Hopitaly maro hafa hatramin'izao no voadaroka baomba. Farafahakeliny niisa 375 ireo fitokonana tany amin'ireo toeram-pitsaboana no voarakitra hatramin'ny niantombohan'ny Revôlisiôna Siriana, araka ireo Fizisiana ho an'ny Zon'olombelona. Noho izany, ny ankamaroan'ireo lehilahy sy vehivavy mitsabo ireo maratra any amin'ireo hopitaly vonjimaika ambanin'ny tany dia mety ho avy amin'ireo mpianatra mpitsabo vao taona voalohany ka hatramin'ireo olona tsy manana fiofanana ara-pitsaboana mihitsy.
Mitovy amin'izay, olon-tsotra, manomboka amin'ireo mpanao mofo ka hatramin'ireo mpitaiza zaza, mpanao hosodoko ka hatramin'ireo mpanjaitra, ireo olona voalohany mamaly ny antso mba handrafitra ny Mpisatroka Fotsy ; izany no mahatonga ireo mpanohana ny hetsika hangataka ireo vahoaka hanao sonia fanambaràna iray ho fanohanana ireo Mpisatroka Fotsy mba hahazo ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana 2016.
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: NAvaozina ity lahatsoratra ity tamin'ny 18 Aogositra mba hanitsiana ny isan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo Mpisatroka Fotsy ho 3.000 fa tsy 130.